Indwangu yezindlela ezine zokulingisa i-hemp spandex indwangu yabakhiqizi bebhulukwe labesifazane nabaphakeli | I-Yun Ai
Ulapha: ekhaya - Imikhiqizo - Indwangu yezindlela ezine zokulingisa i-hemp spandex yebhulukwe labesifazane
Indwangu ethambile futhi ethokomele yokuthanjiswa kwezindlela ezine ye-trouser yabesifazane, enamaphethini wokulingisa we-hemp ayingqayizivele, imibala eminingi ongayikhetha, hhayi imibala emibili kuphela njengoba isithombe sikhombisa ngenhla. Uma ufuna ukwenza ngezifiso umbala wakho, sicela usithumele isampula yakho izindwangu.
Izindwangu ezenziwe nge-polyester fiber zinobunono obuhle, ukumelana nemibimbi, ukugcinwa komumo, ukusebenza okuhle kakhulu kokuwasha nokugqoka nokuqina, njalonjalo ukuze isetshenziswe kakhulu kuzo zonke izinhlobo zezindwangu zezingubo. Ingasetshenziselwa ukugqoka imfashini, kepha iyathandwa kakhulu ngekhono layo lokumelana nemibimbi nangenxa yokugeza kwayo okulula. Ubulukhuni bayo bukwenza kube ukukhetha njalo ukugqoka kwezingane. I-Polyester ivame ukuhlanganiswa neminye imicu efana nekotini ukuze ithole okuhle kunakho konke imihlaba. Indwangu ye-Viscose ibukeka ikanokusho, kepha ayibizi. Imizwa yayo ethambile nosilika ofana nosilika yenza i-viscose rayon ithandwe, inokugcinwa okuhle kakhulu kombala. Ingabamba udayi isikhathi eside naphezu kokuwashwa okuningi. Ekuqaleni kwenqubo yokuthuthukiswa kwe-spandex, kwahlonzwa ukuthi le nto imelana nokushisa okukhulu, okusho ukuthi izindwangu ezaziwa ngokushisa njengeyiloni ne-polyester ziyathuthukiswa uma zihlanganiswa nendwangu ye-spandex.
Ububanzi: 57/58 ''
Into Cha: YA21-2787
Isitayela: mbumbulu hemp
Umbala: Imibukiso yekhadi lemibala
Ukwakheka: T / 46 R / 44 N / 6 SP / 4
Iphakheji: Roll / kabili eligoqiwe
Ukunakwa: Imibala ibukeka yehlukile kumuntu ngenxa yekhwalithi yekhamera nokuqapha izilungiselelo. Ngicela uqaphele.